Fandevenana mpifanolo-bodirindrina tsy nampoizina. Dokotera Jekyll izay mety mbola tsy mahafantatra fa Mr Hyde izy ireo. Ary rehefa misy izy ireo dia tsy hoe nisy fiovana. Izany dia noho ilay fitenenana taloha izay mety hampijoro ny hoditrao hoe "Izaho dia olombelona ary tsy misy olona vahiny amiko", na dia mety ho lozabe aza izany eto amin'izao tontolo izao.
Ny biby, manomboka amin'ny biby an-trano ka hatramin'ny masiaka indrindra, dia tsy mahalala famadihana na fankahalana. Raha ny zava-boahary izay no misy ny mason’ny mpiremby eo anoloana sy ny an’ireo mety ho tra-boina amin’ny sisiny, mba ho hitan’izy ireo ny fahatongavany...
Tsy tazana tonga mihitsy ny olombelona. Ary isaky ny andro vaovao miposaka dia misy biby goavam-be vaovao miseho avy amin'ny toerana tsy ampoizina indrindra. Mampatahotra ny fijoroana vavolombelona momba ny ratram-po mahatsiravina, ny hevitra tsotra momba ny fijerena ny zava-misy (mihantona eo anelanelan'ny simia amin'ny zava-mahadomelina sy ny feon'ny fieritreretana omena any amin'ny lavaka mangitsokitsoka).
Tamin'ny Martsa 2016, tao amin'ny trano iray any ivelan'i Roma, tovolahy roa avy amin'ny fianakaviana tsara dia nandany andro maromaro nanao fety, nihinana kôkainina, pilina ary toaka. Nanapa-kevitra ny hanasa olona izy ireo ary rehefa avy niantso namana maromaro izay tsy afaka na tsy namaly izy ireo dia nahita an’i Luca Varani, zazalahy izay zara raha fantany. Nanolotra rongony sy vola ho takalon’ny firaisana izy ireo. Nifalifaly izy ireo mandra-panombohan’ny fampijaliana azy ka niafara tamin’ny famonoana azy tamin’ny antsy sy ny kapoka marotoa. 23 taona izy, zanaky ny fianakaviana manetry tena eny ambanivohitra, zaza mahay mivelona araka izay azony atao. Tsy nisy nahatakatra ny antony nanaovany izany, tsy nisy valiny noho ny horohoro be. Avy any am-ponja ny iray tamin’ireo mpamono olona dia nilaza fa “te ho fantatra hoe manao ahoana izany mamono olona izany”. 28 sy 29 taona izy ireo: Manuel Foffo, avy amin'ny fianakavian'ny mpivarotra, ary Marco Prato, lehilahy malaza amin'ny fifandraisana amin'ny besinimaro avy amin'ny alina pelaka ao Roma, zanaky ny mpampianatra ao amin'ny oniversite.
El mpanoratra Nicola Lagioia Lasa variana tamin’ilay raharaha izy. Vao avy nahazo ny loka Strega ho an'ny tantara nosoratany teo aloha, ny loka lehibe indrindra tany Italia, ary nanokana efa-taona tamin'ny fiainany ho an'ity tantara ity. Niresaka tamin’ireo rehetra voarohirohy tamin’izany, niaraka tamin’ny namany sy ny havan’izy telo mirahalahy, ny famotorana sy ny fitsarana ary nifanoratra tamin’ny iray tamin’ireo olon-dratsy mihitsy aza. Nilentika tao anatin’ny maizina indrindra tamin’ny alina romana izy ary niditra tao amin’ny bourgeoisie romana tsy azo idirana. Ny vokatr'izany dia tantara ara-literatiora lehibe: fanadihadiana momba ny toetran'ny olombelona eo ambanin'ny fahanginan'ny arabe foana ao amin'ny tanàna mandrakizay.
Azonao atao izao ny mividy ny boky "Ny Tanànan'ny Velona", nosoratan'i Nicola Lagioia, eto:
Tags Boky ankehitriny, Nicola Lagioia, Tantara foronina